> Ahoana no hitazomana ny hoditra vita amin'ny hoditra
Ny hoditra faux dia safidy hafainganina lafo vidy sy maharitra kokoa amin'ny tena hoditra. Izy io dia ampiasaina amin'ny fanaka, fitafiana, lamba famaohana fiara, poketra, fehikibo ary maro hafa. Ny hoditra vita amin'ny faux dia hita amin'ny endrika isan-karazany, toy ny hoditra polyurethane, vinyl na suède faux. Ny tsirairay amin'ireto fomba ireto dia azo diovina amin'ny lamaody mitovy amin'izany, miaraka amin'ny fahasamihafana lehibe, mamela ny fanadiovana ny volon'ny biby, ny vovoka, ny loto ary ny potipoti-javatra. Izany dia hitazona ny fitafianao sy ny fanaka ho lasa vaovao kokoa.
1, Mandrosoa lamba na spaonjy amin'ny rano ary esory ny tamponao.
Te hampiasa rano mafana ianao. Ny famafana ity fomba ity dia hahazo vovoka, loto ary fako hafa. Ny polyurethane dia diovina mora kokoa noho ny hoditra mahazatra, ary izany dia ampy ho an'ny fikarakarana isan'andro sy ny faritra maloto kely
2,Mampiasà savony iray amin'ny savony mahery.
Na ny fiatrehana tasy na loto nofafazana dia mety tsy ho ampy ny rano tsotra. Mampiasà savony tsy misy fofona mba hananana otrikaina na residu mety hisy fiatraikany amin'ny hoditra. Atsofohy amin'ny grime mafy kokoa ny bar.
Azonao atao koa ny mampiasa savony misy ranony na detergent lovia ho an'ity dingana ity
3,Hamafa savony amin'ny lamba lena.
Hamafa tsara mandra-pahatapitry ny savony mazava tsara. Ny famelana ny savony amin'ny tany dia mety hanimba azy.
4,Avelao ho maina ny faritra.
Raha manadio lahatsoratra amin'ny akanjo ianao dia azonao ahantona ho maina. Raha miatrika fanaka dia ataovy izay hahazoana antoka fa tsy misy hipetraka na hikasika azy mandra-pahamaina azy tanteraka.
Azonao atao ny mamafa ny tamponao amin'ny lamba maina mba hanafainganana ny fanamainana.
5,Mitifitra protector vinina eo amboninao.
Ireo vokatra ireo dia manampy amin'ny famoahana ny vovoka sy ny fotaka, mahatonga ny fanadiovana tsy dia matetika loatra. Miaro amin'ny taratra UV izy ireo matetika. Rehefa avy nisoroka madio kokoa ny tany dia kosao madio amin'ny lamba famaohana